Safal Khabar - अर्बपति बनेका डा. नेपाल पाँच घण्टामै हजारमा झरे
अर्बपति बनेका डा. नेपाल पाँच घण्टामै हजारमा झरे
बुधबार, १८ बैशाख २०७६, १७ : २३
काठमाडौं । मंगलबार, पाल्पाका डा. सन्तोष नेपाल सधै झै अफिसको काम सकेर घर फर्किने तयारीमा थिए । फर्किने क्रममा उनले अनलाईनबाट आफ्नो बैंक एकाउन्ट चेक गरे । उनको नबिल बैंकमा रहेको खातामा २३,७५,९६,३३,७७६.६६ रुपैयाँ (२३ अर्ब ७५ करोड, ९६ लाख, ३३ हजार सातसय छियात्तर रुपैयाँ छैसठ्ठी पैसा) जम्मा भएको देखियो ।
तपाईको ठाउँमा अरु भएको भए त यो पैसा मिसयुज पनि गथ्र्यो होला हैं भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्–‘गथ्र्यो कि, एटिएमबाट अनलिमिटेड पैसा निकालेर चलाउन सक्थ्यो । मैले पहिले विदेशको एउटा घटना अनलाइनमा पढेका थिए, एक महिलाको खातामा एक्कासी ठूलो अमाउन्ट जम्मा भएछ । उनले एटिएम कार्डबाट त्यो पैसा निकालेर सपिङ गरिन् । आफ्ना आफन्तलाई पैसा पठाइन् । उनले त्यो पैसा सबै त्यसरी नै सकिन् । पछि बैंकले आफ्नो पैसाका बारेमा खोजी गर्यो । पैसा कहाँ गयो त भनेर ट्रयाकिङ गदा ती महिलाको खातामा गएको रहेछ । महिलाले पैसा फर्काउन सक्ने अवस्था नभएपछि जेल जानु परेको थियो । सत्य त सत्य नै हो नि । अचानक भएको त्यस्तो घटनामा आफूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नत्र सजायको भागिदार बन्नुपर्छ ।’ उनले घटनाका बारेमा सुनाए ।
बैंकका डिजिटल हेडसँग लामो फोन वार्तापछि आफ्नो खातामा यथावत् रहेको हजार रुपैयाँमा खुसी छन् डा. नेपाल । भन्छन्– ‘२३ अर्ब बढी पैसा बैंकलाई फर्काएर म मेरो खातामा रहेको केही हजारमा रमाएको छु ।’
रिब्दीकोट गाउँपालिका हार्थोक घर भई हाल धापासीमा बस्दै डा. सन्तोष नेपाल जल तथा जलवायु विशेषज्ञ हुन् ।